Tokony Hiala Tsiny Noho Ny Habibian’ny ISIS Ve Ny Miozolomana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Oktobra 2014 8:42 GMT
Pikantsary avy amin'ny “#NotInMyName (Tsy amin'ny anarako): Tsy misolo-tena ny Miozolomana Britanika ny ISIS” tao amin'ny YouTube.
Nandray fitenenana nandritra ny Fivorian'ny Firenena Mikambana tamin'ny 24 septambra, nilaza ny filohan'i Etazonia Barack Obama fa “fotoana izao hoan'izao tontolo izao – indrindra hoan'ny fiarahamonina Miozolomana – mba hitsipaka amin'ny fomba mazava tsara, amin-kery sy am-paharetana ny foto-kevitry ny al Qaida sy ny ISIL”.
Nanonona ireo mpitarika sy ny hetsika Miozolomana i Obama, tahaka ny hetsika #NotInMyName [Tsy amin'ny anarako], miampanga ny foto-kevitra sy ny habibiana mampihoro-koditra ataon'ny ISIS, vondrona mpisintaka tao amin'ny Al Qaida izay tonga hifehy ny faritra midadasika ao Iraka sy Syria amin'ny alalan'ny fampiasana paikady bontolo, mampijaly ary mahery vaika.
Nanangana ny hetsika tao Grande-Bretagne ny Fikambanana Active Change (ACF) taorian'ny fanapahan-dohan'ilay Britanika mpiasa mpanao asa soa, David Haines, mba hanaporofoana fa “tsy misolo-tena ny Miozolomana Britanika ny ISIS” ary “tsy misy ifandraisana amin'izy ireo mihitsy.”
Nilaza momba ny hetsika tao amin'ny habaky ny fikambanana ny ACF:
Mampianatra filaminana, fanajana sy fitiavana ny Islamo. Miafina ambadiky ny Islamo hosoka ny ISIS. Tsy misy idirany amin'izay ijoroanay izany. Lazao ny ISIS fa tsy afaka mamono olona amin'ny anaranay izy ireo
Nanjary nalaza tao amin'ny Twitter ny hetsika ka sioka an'arivony no nivoaka tamin'ny alalan'ny diezy Twitter #NotInMyName. Ohatra tamin'izany ireto:
Tsy misy idirany amin'ny Islamo ireo olona (ISIS) ireo, tsy misy idirany tanteraka amin'ny fivavahanay #NotInMyName
Tokony esorina ny ISIS ratsy fanahy ary tokony handroso ny Miozolomana rehetra manerantany ary hilaza hoe #NotInMyName tsy misolo-tena ny foto-kevitry ny Islamika velively na dia iray aza izy ireo
Na dia izany aza, tsy ny miozolomana rehetra no mankasitraka izany hoe andrasana sy terena hiala tsiny noho ny heloka tsy nataony izy ireo, na amin'ny amin'ny anaran'ny vondrona mahavita habibiana amin'ny anaran'ny fivavahan-dry zareo.
Tiako ary tsy tiako ny hetsika #NotInMyName. Tsara ny miampanga saingy mandefa hafatra izany fa lazaina ho tompon'andraikitra foana isika
Leo mijery ireo miozolomana mifandramatra amin'ny fialàna tsiny aho mba hanaporofoana ny maha-olombelona azy ireo amin'ireo mpankahala Islamo amin'ny alalan'ny hetsika tahaka ny #notinmyname
Na dia izany aza, tsy izy ireo ihany no naniraka ny ISIS haka an-keriny sy hanapa-doha mpanoratra gazety sy mpiasa mpanao asa soa, mamindra toerana sy manenjika ireo vitsy an'isa ara-pivavahana sy ara-poko, mamono ho faty ireo rehetra izay manembatsembana azy ireo ary manasa atidoha ireo ankizy tsy manan-tsiny hanao herisetra sy fankahalana.
Ankilan'izany, lasibatr'ity vondrona mahery fihetsika ity ny samy miozolomana. Tamin'ny andron'ny 22 Septambra, novonoina lehilahy misaron-tava avy ao amin'ny ISIS ho faty ilay mpisolovava sy mpiaro ny zon'olombelona Samira Saleh Al-Naimi rehefa nitifitra azy tao amin'ny kianjam-bahoaka ao Mossoul, ao Irak izy ireo. Araka ny filazan'ny Foiben'ny Helodrano misahana ny zon'olombelona, naka an-keriny an'i Al-Naimi tany an-tranony ny ISIS tamin'ny herinandro lasa taorian'ny nilazany ny vondrona ho “olon-dia”.
Ao amin'ny Comment is Free section (Takelaka Maimaim-poana ny Fanehoan-kevitra) ao amin'ny Guardian, Mehreen Faruqi, solombavambahoaka Maitso ao amin'ny Antenimieran'ny New South Wales ao Aostralia nanoratra fa na dia fantany aza fa tsy #AreNotInMyName (tsy amin'ny anarako) ny hetsiky ny ISIS, tsy ho terena hanao azafady ho azy ireo mihitsy izy .
Hoan'i Faruqi kosa, mampametraka ny hetsika #NotInMyName fa “tompon'andraikitra tamin'ireo habibiana nitranga tao Iraka ireo miozolomana ary tokony hiampanga azy ireo isika mba hanaporofoina fa tsy misy idirantsika ny amin'izy ireo”. Hoy izy:
Tsy misy afaka mandà fa mahatrotraka tanteraka ireo andian-dahatsasry misy ireo mpanoratra gazety notapahan'ireo mpiasan'ny ISIS loha sy ny vaovao ankehitrinhy mikasika ny vono olona mahatsiravina, ka miteraka valinteny feno fihetseham-po mirehidrehitra, mitaky handray fepetra. Saingy nahoana no terena hanao azafady ny fiarahamonina rehetra na hifampihataka amin'ireo fihetsika tsy mendrika tsy misy idiran'izy ireo?
Natsangana ny diezy #MuslimApologies [#Fialan-tsinin'nyMiozolomana] mba hamazivaziana ny zava-misy fa matetika mahatsiaro voatery hanao azafady ny miozolomana ary mihataka amin'ny fihetsik'ireo vondrona na olo-tsotra Islamista mahery fihetsika.
Hitafy ity t-shirt ity isan'andro aho manomboka androany.
Miala tsiny aho fa miha-maherisetra ny tovolahy rehefa midaroka amin'ny drôna [tantelim-by] sy mamono ny fianakaviany manontolo ho fahavoazana iombonana i Etazonia.
Miala tsiny aho fa mampatahotra anao ny volombavako. Avy amin'ny hetsikaina (hormona) izany, milaza ny marina aho
Amin'ny maha-miozolomana ahy, miala tsiny noho ny Ady Lehibe Voalohany sy ny Ady Lehibe Faharoa aho na dia tsy misy idiran'ny miozolomana aza izany fa raha toa ka.
Miala tsiny aho raha miozolomana fotsy hoditra tsy mitovy amin'ny Arabo. Manahiran-tsaina izany, ary menatra tanteraka aho.
Amin'ny maha-dokotera ahy, miala tsiny aho raha namonjy ny ain'ireo tsy Miozolomana an'arivony. Tsara kokoa ny manao izany ary hanohy hanao izany hatrany hatrany aho.
Miala tsiny aho, mila ahy hanazava tsara aminao aho fa tsy miombo-kevitra amin'ny vono olona, ny vono moka sy ny fanolanana aho.
Hoan'ny maro, toa tsy dia misy lanjany manoloana ny fitomboan'ny fankalahana Islamo ny fandraisana anjaran'ny miozolomana amin'ny asa soa. Mampatsiahy antsika ny sasany tamin'ireo zava-baovao noforonina nanova izao tontolo izao ho toerana mahafinaritra iainana i Kam Shaheen:
Miala tsiny amin'ny alzebra, kamera, oniversite, hopitaly, ary ny kafe ihany koa.